Mhando Braking musi Electric Skateboards - Jomo Technology Co., Ltd
Mhando Braking musi Magetsi Skateboards
In motokari chero yemagetsi, pane zvakawanda mhando chikuru braking- guru, kukweshera, uye rokuzvivandudza rakaita kuti irambe braking. Vose kushandisa nzira dzakasiyana siyana tava kuderera motokari pasi.
Kukweshera mabhureki ndiwo chete mhando mabhureki zvinoshandiswa pamusoro motokari kwakajairika. Zvikurukuru, kukweshera pamusoro akaputsa Disc inoshandiswa kutendeutsa kinetic simba (kufamba motokari) kupinda kupisa, izvo DZEMUNHU DZINODZORA motokari pasi. Kugara mugwagwa bhasikoro anoshandisawo kukweshera yokurembedza pasi clamping munhu akaputsa ikanyanya pamusoro yomukati pomukombero pamusoro bhasikoro racho vhiri.
Electric Skateboards kazhinji hatishandisi kukweshera mabhureki nokuti zvinoda kura zvokuimba Hardware kuti anopfeka kunze.
Outrunner brushless motors- vakawanda mhando injini inoshandiswa musi dzemagetsi Skateboards-vanotova kutaridza zvachose magnets a kunhivi panozogadzirika hwemhangura waya ronda iri madenderedzwa kuitira kuti kana magetsi kunodzorwa kuburikidza waya, zvinoita kuti pave remagineti anomhanyira mberi yakatarwa pakati magnets a zvachose, achiita injini kuti tenderera. The in coiled waya ive electromagnet. The inotonhorera chinhu pamusoro magnets A ndechokuti nevakomana zvinogona occur- kana iwe tenderera kuti rinobva mhete kumativi yemhangura waya, izvozvo otaura Magetsi ari waya. Izvi nderei wechikoro shure zvose aishingaira uye rokuzvivandudza rakaita kuti irambe akamedura hurongwa, uye sei emagetsi chamutsa magetsi.
Dynamic braking ndiyo hurongwa vainyanyoshandisa nechitima locomotives. Munyika ino, asi kinetic simba iri dzikwanise kupisa nokutamisa ari nemagetsi ari Kukosa Motors mugomba resistor, iyo zvino dissipates simba sezvo kupisa. Kana magnets A iri injini kunyengedza mumwe kuitika mu waya yemhangura, nemishonga iri vanowanika, tava kuderera injini Kukosa.
Muna nhasi, pane imwe yemagetsi skateboard kuti anoshandisa simba braking pachiimbwa rokuzvivandudza rakaita kuti irambe braking.
rokuzvivandudza rakaita kuti irambe Braking
Electric Skateboards anonyanya kushandisa hurongwa inonzi "rokuzvivandudza rakaita kuti irambe braking". Izvi zvakafanana simba braking, kunze panzvimbo redirecting magetsi kuva resistor kuti kupera simba sezvo kupisa, zviri redirected kunyika bhatiri, recharging nayo.
The chikuru kuvatsamwira rokuzvivandudza rakaita kuti irambe hurongwa ndechokuti kana bhatiri izere, hachigoni kubvuma zvimwe kuitika pasina overloading uye kuparadza bhatiri. Nokuda kwaizvozvi, mapuranga kuti chete kushandisa rokuzvivandudza rakaita kuti irambe braking achagara vanorasikirwa kugona akaputsa mushure bhatiri anorova 100% mutariri.
Mapuranga kufanana Koowheel Board kana huvandudzike Board achaita beep kuti mabhureki asati cheka, asi izvi kazhinji hazvina kukwana kuti ruzivo vatasvi kuti bail kubvisa bhodhi. Ndicho chikonzero zvakakosha ndichiremekedza sei retsoka akamedura pa anokwira rako yemagetsi skateboard ose nokukurumidza. The guru nani pamwe Mellow Drive ndechokuti anoshandisa zvose rokuzvivandudza rakaita kuti irambe uye simba braking- kamwe chete bhatiri izere (uye kana mumwe puranga kuti mabhureki kuti richivezwa zvachose), izvozvo Minamato haipindurwe kune simba braking uye achiri unokubvumira kumboderera.
Post nguva: Dec-14-2017